Nhepfenyuro mhenyu yeJiake Wire Mesh Machinery iri kuuya munaKurume, tinogamuchirwa kuti tione
Tichava nenhepfenyuro ina dzepamoyo yeiyo yakasungwa waya yepasi muchina munaKurume, uye tichakutora kuti udzidze zvakawanda nezve yedu fekitori yeJiake, uye tichakutora iwe kuti udzidze zvakawanda nezve muchina. Main waya pajira riya muchini tsananguro, kusanganisira waya pajira riya muchina, huku keji keyi pajira riya muchina, ch ...
Maererano gwaro rakaburitswa neHebei Provincial Dhipatimendi reMabhizimusi muna Zvita 8, 2020, kambani yedu yakadomwa kune eprovince-chikamu kuyambuka muganho e-commerce kuratidzira mabhizinesi akapihwa neHebei Provincial department reCommerce. Kune makumi maviri nemaviri emabhizinesi akasarudzwa kubva ...
Jiake waya mesh michina vatengesi vanogara vainewe!
Uchave mutambo wedu mukuru mumazuva gumi- Mutambo weChirimo. Zvese zvemuchina zvapera zvicharamba zvichitakura kune mutengi wedu mukati memazororo edu, kubatsira vatengi kuwana muchina pakutanga. Uye kune imwezve nhau yakanaka. Nharaunda iri muShijiazhuang yave kutoda kuvhura izvozvi. Tinogona se ...
Munguva yekurwisa denda nguva, isu tinopa masevhisi maawa makumi maviri nemana pazuva
Kunyangwe hosha yakanyanya sei kana kuti denda rakakura zvakadii, hatigone kumisa kutaurirana kwakanaka pakati pedu nevatengi vedu! Kunyangwe tiri kuzorora kumba nekuda kwedenda, izvi hazvikanganise kugona kwedu. Pakushanda kubva kumba, vekambani vatinoshanda navo vachiri kushandira vatengi vese ...
Nzira yekusarudza yekuzarira huku keji mambure muchina?
Tine muchina unonyanya kushandiswa mukugadzirwa kweindasitiri yekuberekesa, iyo inogona kutsiva welded waya mesh michina, uye inogona zvakare kushandiswa mukugadzira matanga ehuku, tsuro keke, mink matanga, huku ehuku, makava makaji, dzinovaraidza matanga uye zvimwe zvigadzirwa. Our huku keji pajira riya pajira riya nomoto Mach ...
Ungatanga sei fekitori nyowani kugadzira waya zvigadzirwa?
Vamwe vatengi vakatibvunza: Ini ndiri mutsva kutanga mu fence indasitiri, chii iwe chaunondiudza kuti ndigadzire kutanga? Kune mutengi mutsva, kana iwe usina bhajeti yakakwana, ndinokurudzira kuti ufunge zvinotevera zvinhu: 1. Zvizere otomatiki cheni yekubatanidza fenzi muchina; Waya dhayamita: 1.4-4.0mm GI waya / PVC waya Mesh kuvhura siz ...
Cold inotenderera simbi bhaa ribbed muchina
Cold kutenderera simbi bhaa ribbed muchina unoshandiswa kutenderedza pamusoro pesimbi yakatenderera mabara kuita maviri kana matatu crescent mativi; Raw zvinhu: yakaderera kabhoni simbi kutenderera bhaa Usage: muchina uyu unonyanya kutenderera dhayamita ye3-8mm ribbed mabara, iri zvinowanzoshandiswa mugwagwa nhandare, kuvaka indasitiri; Thi ...
BRC mesh yekugadzira mutsara
BRC mesh inozivikanwa mune yekongiri indasitiri; ine Mucheka unosimbisa pajira riya, kwakakurudzira welded pajira riya, gusset welded chidzitiro pajira riya uye welded gabion pajira riya… nezvimwewo; Sezvo waya pajira riya michini gadzira, tinogona kukupa mhinduro yakakwana maererano nezvaidiwa wako; 1. waya muitiro muchina; ...
Anti-glare mesh muchina
Anti-glare mesh ndeimwe yeaya anozivikanwa waya mesh, anonyanya kushandiswa sebhendi yekuzviparadzanisa yemugwagwa mukuru, 1. Izvo zvinodikanwa kubatidza danda rakakwirira kana uchityaira husiku munzira yekumhanya, iyo ichave ine kupenya kwakasimba pameso emutyairi. uye kukanganisa kukanganisa kutyaira. The girini bhandi anogona kuvhara kuti li ...
Welded pajira riya muchina vachizvitakudza
Nhasi tichangopedza kurodha imwe seti yakasungwa mesh muchina wevatengi veAfrica; 1. Iyi mesh mesh muchina ine yakasarudzika mesh roller chikamu kuitira kuti iyo yekumachina muchina inogona kuramba ichishanda apo mushandi achitora-yekupedzisira yekupedzisa mesh roll kubva kune roller roller; 2. ichi welded pajira riya muchina c ...
Tambo inosimudza & yekucheka muchina
Tambo yakatwasuka & yekucheka muchina ndeimwe yeakakurumbira waya maitiro muchina; Tine mhando dzakasiyana dzekusimudza & yekucheka muchina iyo inogona kukodzera dzakasiyana waya dhayamita; 1. 2-3.5mm Waya dhayamita: 2-3.5mm Kucheka kureba: Max. 2m Kucheka kumhanya: 60-80 mita / min Inokodzera ...
Yakatwasuka waya yekudhira muchina kurodha
Nezuro, isu takangopedza kurodha imwe seti Yakarurama waya yekudhiza muchina; Yakatwasuka waya yekudhira muchina, inogadzirirwa yakatwasuka kana kutsausa yemahara dhizaini kuti tipe zvirinani dhirowa, isu takagadzira zvinoenderana nechikumbiro chevatengi; Inlet waya dhayamita 5.5mm, nzira yokuburitsa waya dhayamita iri ...